★မြန်မာ့အလင်း★: မိုဟာမက်တပည့် ၇ နှစ်သမီးငယ်ကို မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း၊ ညီမတွေကို မဖွယ်မယာလုပ်ခြင်း
မိုဟာမက်တပည့် ၇ နှစ်သမီးငယ်ကို မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း၊ ညီမတွေကို မဖွယ်မယာလုပ်ခြင်း
အသက် ၅၁ နှစ်ရှိတဲ့ မိုဟာမက်ဟာ ၆ နှစ်အရွယ် Aisha ကို ယူခဲ့ပါတယ်။ အာရပ်တွေဟာ ချွေးမကို သမီးအရင်းလို မှတ်ယူပါတယ်။ မိုဟာမက်ဟာ ချွေးမကိုလည်း သူ့မိန်းမ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မိုဟာမက်ကို စံနမူနာယူတဲ့သူတွေအမြင်မှာ သမီးငယ်နဲ့ လိင်ဖေါက်ပြန်ခွင့်ရှိတယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မွတ်ဆလင်တွေ လောကမှာ အဖေက သမီးအရင်းကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့မှုတွေဖြစ်တာ မကြာခဏပါပဲ။ မနေ့တနေ့က မလေးရှားမှာ အသက် ၄၇ နှစ် ရှိတဲ့အဖေက ၇ နှစ်အရွယ် သမီးလေးကို စအိုကနေ အတင်း အဓမ္မလိင်ဆက်ဆံ မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးငယ်က စအိုက နာလွန်းလို့ ဆရာဝန်ကို သွားပြရာကနေ အဖေရဲ့ ယုတ်မာမှုကို သိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းထဲမှာပဲ ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ အစ်ကိုဟာ ၁၁ နှစ်နဲ့ ၈ နှစ်အရွယ် ညီမ နှစ်ယောက်ကို မဖွယ်မရာ လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သိလာမှာက မွတ်ဆလင်စစ်လေ မိသားအစုအတွင်း ဖေါက်ပြန်လေဆိုတာပါပဲ။ အသေးစိပ်တော့ မိမိဖာသာ သတင်းမှာပဲဖတ်ပါတော့…
Daughter, two sisters sexually abused
KLANG: A father isaprotector. So is an elder brother. But two cases last week show even protectors can become predators.
A man sodomised his 7-year-old daughter, while, in another case,abrother forced his younger sister to perform oral sex on him.
A doctor at Tengku Ampuan Rahimah Hospital lodgedapolice report on Thursday afterarectal examination ofa7-year-old girl revealed tears in her anus.
The girl,aYear One pupil from Rantau Panjang, Klang, had been taken to the hospital after complaining of pain in the anus.
A police source said: "The doctor was initially reluctant to release the victim back into her mother's care but had no choice."
It is learnt that the victim's father,alorry driver aged 47, has since gone into hiding.
In the second incident,a19-year-old man is being sought by police after he is said to have sexually assaulted both his younger sisters at their home in Taman Seri Putra, Banting, on Wednesday .
The suspect is said to have pulled his sisters, 11 and 8, into the bedroom while their parents were away.
He allegedly pushed the 11-year-old girl onto the bed and kissed her.
The suspect is said to have dragged both girls into the toilet where he ordered the younger girl to perform oral sex on him.
He warned the girls to keep quiet about the incident. However, the elder girl told her mother what happened when she returned home.
However, at that time, the mother did not believe her daughter. Medical examinations indicated neither girl had been raped.
Selangor CID chief Senior Assistant Commissioner II Hasnan Hassan said police were looking for the two suspects.
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:12 PM
တောသားများ အမှန်အတိုင်း သိကြစေ ။ ကလေး မွေးစက် အကြီးမှ ထွက်လာသော ကလေး မွေးစက် အသေးလေး ကျန်းမာရေးအတွက် ၊ ကလေး မွေးလမ်း ကြောင်းတွင် ပိတ်ဆို့နေသော အကာအမှေးတို့ကို ကလေး မွေးစက်ပိုင်ရှင်က ကိုယ်တိုင် ရှင်းလင်း သုတ်သင် ဖယ်ရှားပေးသည် ဟု သိကြစေ ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အားလုံး ဤ ဓလေ့ကို လိုက်နာကြစေ ။ မလိုက်နာလျင် ကြီးစွာသော အပြစ်ဒဏ် သင့်ကြစေ ။ ဤ အာယတ်တော်ကို ကုရမ် ကျမ်းမြတ်မဟာ၏ နောက်ဆက်တွဲ ၊ အက်စ်အေ အပိုဒ်၁း၁ အဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ကြစေ ။
ဟုတ်တယ် ငါလိုးမသားကုလားတွေ အကုန်သတ်ပစ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ပြိုင်ခွင့်မရှိဘူး ဆိုပြီးညစ်လုံးလုံးနေတဲ့ကောင်တွေ။ခွေးသားတွေ။